HomeKnowledgeဆံပငျပုံစံကနေ သိနိုငျမယျ့ ယောကျြားလေးတှရေဲ့ အကွောငျး
လူတယောကျမှာ ဆံပငျပုံစံကလညျး အလှနျအရေး ပါပါတယျ။ ဆံပငျပုံစံကနေ လူတဈယောကျ အကွောငျးကို မှနျးဆလို့ ရနိုငျပါတယျ။
ဆံပငျရှညျရငျ ကွညျ့ကောငျး ပါတယျ။ ဆံပငျရှညျတဲ့ အမြိုးသားတှကေ အမြားအားဖွငျ့ တီထှငျဉာဏျရှိကွပါတယျ။ ဆံပငျအရှညျတှကေ 8 ရာစုနဲ့ 11 ရာစုနှဈ ကာလကွားက ဗိုကျကငျး လူမြိုးစုတှကေို သတိရသှားစေ ပါတယျ။ ယောကျြားလေး အမြားစုက မသိစိတျကနေ ဆံပငျရှညျကို ထားခငျြကွတယျလို့ ပွောပါတယျ။ ဆံပငျရှညျတော့ နညျးနညျးတော့ အလုပျရှုပျတာ ပေါ့နျော။
ဆံပငျတိုသူတှကေ ယောကျြားမာနျဖီပွီး သဝနျတိုတတျ ကွပါတယျ။ ပွီးတော့ သူမြားအပျေါ လှမျးမိုးနိုငျတဲ့ ဩဇာတိက်ကမ နဲ့လညျး ပွညျ့စုံပါတယျ။ ဆံပငျအတို ပိုငျရှငျတှကေ ထကျမွကျပွီး ပြျောပြျောလညျး နတေတျကွ ပါတယျ။
3. ကတုံး ဆံပငျ
အလှနျထကျမွကျပွီး သူမြားတှထေကျ ရှကေို့ပိုပွီး မွငျနိုငျသူပါ။ ဆုံးဖွတျခကျြ ကိုလညျး မှနျမှနျကနျကနျ ခတြတျပါတယျ။ သူတို့တှကေ အပွုံးအရယျ နညျးပွီး တညျတညျ တံ့တံ့နတေတျ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့အပွုံးက နရေောငျလို တောကျပတယျလို့ ပွောကွပါတယျ။ ဆနျးဆနျးပွားပွား ပစ်စညျးတှကေိုလညျး သဘောမကတြတျ ပါဘူး။ သစ်စာ အလှနျရှိတဲ့ သူတှပေါပဲ။
ဆံပငျအလယျခှဲ ပုံစံရှိတဲ့ အမြိုးသားတှကေ ဝီရိယရှိပွီး ဇှဲကောငျးပါတယျ။ ရညျမှနျးခကျြကို ရောကျအောငျလညျး မရပျမနား ကွိုးစားတတျ ပါတယျ။ သူတဈပါးကို စိတျအနှောငျ့အယှကျ မဖွဈစဘေဲ အေးအေးဆေးဆေး နတေတျကွ ပါတယျ။
ဒီလို ဆံပငျပိုငျရှငျတှကေ စိတျကူးယဉျတတျပွီး အတိတျက အခြိနျတှကေို လှမျးနတေတျ ပါတယျ။ တဈခြိနျကတော့ ဒီလို ဆံပငျအထောငျတှကေ တျောတျောကို လူကွိုကျမြားခဲ့ တာပါ။ ဆံပငျ အထောငျပုံစံ ရှိသူတှကေ ပြျောပြျောနတေတျလို့ လူအမြားက သတိပွုမိကွ ပါတယျ။
ရိုမနျတဈဆနျတဲ့ နရောမှာ နှဈယောကျမရှိပါဘူး။ ဘဝကို ကောငျးကောငျး မှနျမှနျ တညျဆောကျတတျကွ ပါတယျ။ မိနျးကလေးတှေ ကွားမှာလညျး အတျော စှံပါတယျ။
7. One way ဆံပငျ
ဒီလို ဆံပငျပုံစံ ရှိတဲ့သူတှကေ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှု ရှိကွပါတယျ။6packs တှေ ရှိပွီး အကှကျတှေ ပါတဲ့ အင်ျကြီကို သဘောကတြတျ ကွပါတယျ။6packs မရှိရငျလညျး နောကျဆို ရှိလာပါလိမျ့မယျ။ ခတျေနဲ့ လြျောညီအောငျလညျး နတေတျကွ ပါတယျ။
8. အပျေါတှငျ စုထုံးထားသညျ့ ဆံပငျ
ကိုယျ့ကိုယျကို အလှနျ ယုံကွညျမှုရှိပွီး ဝဖေနျမှုတှကေို မတုနျလှုပျ ပါဘူး။ အနုပညာကို ဝါသနာပါပွီး အေးအေးဆေးဆေး နတေတျပါတယျ။ သူတို့ရဲ့စိတျကို ခနျ့မှနျးရ မလှယျကူ ပါဘူး။
ဆံပင်ပုံစံကနေ သိနိုင်မယ့် ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အကြောင်း
လူတယောက်မှာ ဆံပင်ပုံစံ ကလည်း အလွန်အရေး ပါပါတယ်။ ဆံပင်ပုံစံကနေ လူတစ်ယောက် အကြောင်းကို မှန်းဆလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
ဆံပင်ရှည်ရင် ကြည့်ကောင်း ပါတယ်။ ဆံပင်ရှည်တဲ့ အမျိုးသားတွေက အများအားဖြင့် တီထွင်ဉာဏ်ရှိကြပါတယ်။ ဆံပင်အရှည်တွေက 8 ရာစုနဲ့ 11 ရာစုနှစ် ကာလကြားက ဗိုက်ကင်း လူမျိုးစုတွေကို သတိရသွားစေ ပါတယ်။ ယောက်ျားလေး အများစုက မသိစိတ်ကနေ ဆံပင်ရှည်ကို ထားချင်ကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဆံပင်ရှည်တော့ နည်းနည်းတော့ အလုပ်ရှုပ်တာ ပေါ့နော်။
ဆံပင်တိုသူတွေက ယောက်ျားမာန်ဖီပြီး သဝန်တိုတတ် ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ သူများအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ ဩဇာတိက္ကမ နဲ့လည်း ပြည့်စုံပါတယ်။ ဆံပင်အတို ပိုင်ရှင်တွေက ထက်မြက်ပြီး ပျော်ပျော်လည်း နေတတ်ကြ ပါတယ်။
3. ကတုံး ဆံပင်
အလွန်ထက်မြက်ပြီး သူများတွေထက် ရှေ့ကိုပိုပြီး မြင်နိုင်သူပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက် ကိုလည်း မှန်မှန်ကန်ကန် ချတတ်ပါတယ်။ သူတို့တွေက အပြုံးအရယ် နည်းပြီး တည်တည် တံ့တံ့နေတတ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အပြုံးက နေရောင်လို တောက်ပတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဆန်းဆန်းပြားပြား ပစ္စည်းတွေကိုလည်း သဘောမကျတတ် ပါဘူး။ သစ္စာ အလွန်ရှိတဲ့ သူတွေပါပဲ။
ဆံပင်အလယ်ခွဲ ပုံစံရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေက ဝီရိယရှိပြီး ဇွဲကောင်းပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်ကို ရောက်အောင်လည်း မရပ်မနား ကြိုးစားတတ် ပါတယ်။ သူတစ်ပါးကို စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေဘဲ အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်ကြ ပါတယ်။
ဒီလို ဆံပင်ပိုင်ရှင်တွေက စိတ်ကူးယဉ်တတ်ပြီး အတိတ်က အချိန်တွေကို လွမ်းနေတတ် ပါတယ်။ တစ်ချိန်ကတော့ ဒီလို ဆံပင်အထောင်တွေက တော်တော်ကို လူကြိုက်များခဲ့ တာပါ။ ဆံပင် အထောင်ပုံစံ ရှိသူတွေက ပျော်ပျော်နေတတ်လို့ လူအများက သတိပြုမိကြ ပါတယ်။
ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ နေရာမှာ နှစ်ယောက်မရှိပါဘူး။ ဘဝကို ကောင်းကောင်း မွန်မွန် တည်ဆောက်တတ်ကြ ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ ကြားမှာလည်း အတော် စွံပါတယ်။
7. One way ဆံပင်
ဒီလို ဆံပင်ပုံစံ ရှိတဲ့သူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိကြပါတယ်။6packs တွေ ရှိပြီး အကွက်တွေ ပါတဲ့ အင်္ကျီကို သဘောကျတတ် ကြပါတယ်။6packs မရှိရင်လည်း နောက်ဆို ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ခေတ်နဲ့ လျော်ညီအောင်လည်း နေတတ်ကြ ပါတယ်။
8. အပေါ်တွင် စုထုံးထားသည့် ဆံပင်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလွန် ယုံကြည်မှုရှိပြီး ဝေဖန်မှုတွေကို မတုန်လှုပ် ပါဘူး။ အနုပညာကို ဝါသနာပါပြီး အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စိတ်ကို ခန့်မှန်းရ မလွယ်ကူ ပါဘူး။